Showing ११-२० of १८० items.
धरान । प्रतिनिधिसभाको जारी गतिरोध अन्त्य गरी संसदलाई प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महाराले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले संसदको अवरोध हटाउने सहमति गरेको हो । सोमबार संसद भवनमा बसेको सर्वदलीय बैठकले फेरि यस्तो गतिरोधको उत्पन्न हुन नदिन आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिमा रहने सांसदको नाम सभामुखले संसद बैठकबाटै पढेर सुनाउने सहमति भएको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाले सर्लाही घटनाको छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै सदनमा अवरोध गर्दै आएका थिए । सहमतिपछि संसदको गतिरोध हटाउन दल सहमत भएका छन् । संसदीय छानविन समिति गठनको क
शिलान्यास भइसकेको ट्राफिक प्रहरीको भवन खोइ ?
बिर्तामाेड । झापा जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको भवन निर्माणको चर्चा अलपत्र परेको छ । प्रतिबद्धता बमोजिम बिर्तामोड नगरपालिकाले जिल्ला जमिन उपलब्ध गराउन नसकेपछि ६ महिना अघि शिलान्याससमेत भएको ट्राफिक भवन शुरु नभएको हो । बिर्तामोडको मुक्तिचोकमा रहेको ट्राफिक प्रहरीको जिल्ला कार्यालय भवन पायक पर्ने स्थानमा निर्माण गर्नका लागि बिर्तामोड नगरपालिका ३ मा रहेको खाली जमिन उपलब्ध गराउने बिर्तामोड नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो । तर, जग्गाको स्वामित्व कसको नाममा छ भन्ने पत्ता नलगाई गरिएको निर्णयले बिर्तामोड नगर प्रमुखको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । तत्कालिन ‘साझाको कार्यालय’ रहेको ८ कठ्ठा जमिनम
आपसी किचलोमा काङ्ग्रेसको कार्यक्रम
पथरीशनिश्चरे । नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरू सहभागी भएर पथरीशनिश्चरेमा हुने भनिएको जीपी कोइराला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यक्रम आपसी किचलोका कारण स्थगित भएको छ । जीपी कोइराला अध्ययन केन्द्र मोरङले गर्ने विचार गोष्ठीको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अवस्थामा अचानक स्थगितको कुरा आएपछि पार्टीमा आपसी असन्तुष्टि बढेको छ । ६ दिन अघि निधन भएका तरुण दलका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पोषणकुमार मल्ल किसानको शोकको कारण देखाएर पार्टीको एउटा पक्षले एक्कासी कार्यक्रम स्थगित गरेको जीपी प्रतिष्ठान अध्ययन केन्द्रका जिल्ला सभापति सुविन पराजुलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पथरीको सीनभिलेज पार्टी प्यालेसमा हुने कार्यक्रममा
भारत प्रशासित कश्मिरमा जारी तनावका कारण पाकिस्तान सरकारमा निकै दिक्दारी देखिएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आइतबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउनुले पनि तपाईं यो अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा नेताहरुसँगै सैन्य अधिकारी पनि हुन्छन् । यो बैठकपछि वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री खानले भारतको आक्रामक रवैयाबाट सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने बताएका छन् । ‘कश्मिरको शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण समाधानबाट मात्रै दक्षिण एसियामा शान्ति र सुरक्षाको मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।’ उनले भनेका छन् । भारत प्रशासित कश्मिरमा के भइरहेको छ पाकिस्तानी मिडियामा केही बताइएको छैन
भारत प्रशासित काश्मिरमा मुख्यनेता नेताहरुलाई नजरबन्द, धारा १४४, पर्यटक र अमरनाथ तीर्थयात्रीहरुलाई तत्काल घाटी छोड्न दिइएको आदेशपछि भारत सरकारले चालेको कदमका बारेमा अनेक अनुमानहरु लगाउन थालिएको छ । यसका बारेमा न त जम्मू-काश्मिर प्रशासनकातर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छ, न त केन्द्र सरकारले कश्मिरमा के हुन गइरहेको छ भन्ने बारेमा प्रष्ट्याएको छ । घाटीमा ठूलो चरमपन्थी हमला हुन सक्ने सूचना पाएपछि सरकारले यस्तो कदम उठाएको केही मानिसहरुको अनुमान छ । कश्मिरभन्दा बाहिर राजनीतिक आक्रमणमा अनुमानको बजार तातेको छ । मोदी सरकारले भारतीय संविधानमा काश्मिरलाई दिइएको विशेष दर्जा
शुरु भयो लाखेनाच, धरानको पुरानो बजारमा यस्तो देखियो (भिडियाे)
धरान । आज २०७६ साउन २० गते सोमबार तद्अनुसार ५ अगस्ट सन् २०१९ । पञ्चमी तिथि, नाग पञ्चमी÷ कल्की जयन्ती । यो दिन नेपाली धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान बोकेको लाखेनाच अर्थात् लाखेजात्रा शुरु भएको छ । नेवार समुदायले विशेष पर्व वा जात्राका अवसरमा लाखेनाच नाच्ने गर्छन् । सांस्कृतिक पर्वका रुपमा वर्षैपिच्छे मनाइने लाखेनाच यो वर्ष पनि शुरु भएको छ । नेवार समुदायमा नागपञ्चमीका दिनदेखि परम्परागत रूपमा लाखेनाच शुरु हुन्छ र कृष्ण जन्मअष्टमीका दिन अन्त्य हुन्छ । लाखे नाचका क्रममा भेषभूषा र चालचलन एवम् रोपाइँ जात्रा, घोडे जात्रा, गाईजात्रा र समाजका विभिन्न विकृतिमाथि व्यङ्ग्य प्रहार गर्ने गरिन्छ । जसले
१,३७० पटक पढिएको
धरान । प्रदेश १ का पहाडी तथा तराईका जिल्लामा खडेरी, बाढी पहिरोले जनजीविकालाई असर गरिरहँदा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस निक्र्यौल निकालेको छ । यसै सन्दर्भमा नेकाले प्रदेश १ संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । धनकुटा, खोटाङ, उदयपुरलगायत जिल्लाका स्थानीय तहमासुख्खा खडेरीले बालीनाली खेतमै सुकेको र अनिकालको सामना गर्नुपरेको शुक्रबार प्रदेश संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताए । नेकाले दर्ता गराएको प्रस्तावमा १६ जनाको ज्यान गएको, राहतमा ढिलाइ गरेको, प्रदेशभित्रको जनधनको क्षति, क्षतिपूर्ति, अध्ययन, अनुगमन
एनसेल टावरमा बम विष्फाेटः 'विप्लव' नेकपाले लियाे जिम्मा
बिर्तामोड । झापाको बिभिन्न स्थानमा रहेका एनसेल टावरमा भएको बम बिस्फोट र आगजनीको नेत्र बिक्रम चन्द ‘बिप्लप’ नेतृत्वको नेकपाले जिम्मा लिएको छ । नेकपाका झापा सेक्रेटरी मनिषले ब्लाष्ट दैनिकलाई फोन गर्दै बिस्फोट र आगजनीको जिम्मा लिएका हुन् । नेकपाले झापाले बुधबार राती दमकमा रहेको एनसेल टावरमा बम बिस्फोट गराएको थियो । बिस्फोटबाट कुनै ठुलो भौतिक क्षति भने नभएको झापाका प्रहरी प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । यसैगरी झापाको कमल गाउँपालिका, भद्रपुर र अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेका तीनवटा टावरको फेदमा आगजनी गरेको श्रेष्ठले बताए । जुटको वोरामा पेट्रोल छर्किएर
प्रकाशित मितिः श्रावण १६, २०७६
१,२९६ पटक पढिएको
ओसामा बिन लादेनका छोराको मृत्यु भएकै हो ?
अमेरिकी खुफिया अधिकारीका अनुसार अल कायदाका संस्थापक ओसामा बिन लादेनका छोरा महजा बिन लादेनको मृत्यु भएको छ । यद्यपि महजाको मृत्यु कहिले र कहाँ भएको हो, यसबारे स्पष्ट हुन नसकेको बिबिसीले जनाएको छ । यसै वर्ष अमेरिकी सरिकारले हमजाको ठेगाना बताउने व्यत्तिलाई १० लाख यसएस डलर दिने घोषणा गरेको थियो । हमजाको उमेर ३० वर्ष रहेको बताइएको छ । उनले अमेरिकी र अन्य देशमा हमला गर्ने र भिडियो सन्दे्श जारी गरेका थिए । हमजा मृत्युको खबर पहिले एनबीसी र न्युयोर्क टाइम्सले छापेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र ह्वाइट हाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले यस मामिलामा बताउन अस्वीकार गठरे